Barlamaanka DFKM ah oo ka hadlay Qaraxa maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Barlamaanka DFKM ah oo ka hadlay Qaraxa maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Gudoonka Sare ee Barlamaanka DFKM ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ay ku tilmaameen qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya mid masiibo qaran ah.
Gudoomiye Kuxigeenka labaad ee Barlamaanka DFKM ah ee Soomaaliya Cismaan Cilmi Boqore oo u waramaayay Horseed Media ayaa sheegay in wax laga argagaxo ay tahay qaraxii maanta laayay masuuliyin ka tirsan DFKM ah,Arday,Saxaafiyin iyo Macalimiin.
Waxaa u sheegay in arimaha maanta dhacay ay yihin waxaa uu ugu yeeray masiibo qaran isla markaasina uu tacsiyayo intii ku geeriyootay,inta dhaawacana uu ilaahay uga baryayo in Caafimaad u ilaahi siiyo.
Boqore ayaa sheegay in u rajaynaayo in dhowaan DFKM ah ee Soomaaliya ay la wareegi doonto Amaanka guud ee gobolada Koonfureed ee dalka Soomaaliya.
Mar ay Horseed Media weydiisay cid ay ku tuhunsanyihin qaraxaas in ay ka dambeysay,ayaa ka gaabsaday arintaas in u ka hadlo.
”Waan argagaxay runtii marki aan maqlay arimahaasi,waqtigaas Barlamaanka gudiyo ka tirsan ayaa shiraayay,waana soo gaba gabaynay kulankayagii arimahaasi awgeed”,ayuu yiri.
Mar u ka jawaabayay Su’aal ahayd qaraxa maanta saamayn maku yeelan karaa kalfadhiyadi Barlamaanka ayuu sheegay in uusan wax saamayn ah uusan ku yeelan doonin qaraxaasi Kalfadhiyada Barlamaanka.
Cismaan Cilmi Boqore ayaa xusay in arimaha maanta ka dhacay magaalada Muqdisho aan lagu tilmaami karin habacsanaan dhanka DFKM ah ee Soomaaliya ee ay yihin wax qornaa isla markaasina aan siinaba loo baajiyeen.
”Goobo fara badan ayaa qaraxyo ka dhacayaan sida Puntland,Somaliland iyo goobo kale waxaa loo baahanyahay in Amaanka dalalka layska kaashado sida meesha looga saaro cida dhibaatada wada”,ayuu yiri.
Si kastaba hadalka Gudoomiye Kuxigeenka labaad ee Barlamaanka DFKM ah ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmayaa xilli maanta qarax ka dhacay Hotel Shaamoow ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya 20-qof oo ay ku jireen Wasiiro ka tirsan DFKM ah.